ब्लूबेरी ब्रान मफिनहरू - व्यंजनहरु
कसरी एक sirloin टिप रोस्ट काट्न
मिठो र खट्टा मीटबलहरूको लागि साइड डिश
ब्लूबेरी ब्रान मफिनहरू
ब्लूबेरी ब्रान मफिनहरू हार्दिक, स्वास्थ्यकर र स्वादिष्ट हुन्छन्। यो स्वास्थ्यकर नुस्खाले दुई कप शक्तिशाली एन्टिआक्सीडन्टहरू ब्लुबेरीको रूपमा समावेश गर्दछ र साथसाथ एक कप र गहुँ कोलो को आधा सबै भिटामिन बीको लागि तपाइँलाई दिनको आवश्यक पर्दछ!
जस्तो हाम्रो मनपर्ने नास्ता कुकिज , केरा चोकर muffins , वा किसमिस ब्रान मफिनहरू , यो एक हडपड र जाने खाजा को लागी महान हो।
कसरी ब्लूबेरी ब्रान मफिनहरू बनाउने
अफिसमा प्रि-प्याकेज गरिएको स्नैक्स व्यापार गर्नुहोस् यी स्वादपूर्ण मफिनहरूको लागि जुन तपाईंलाई बिहानभरि प्राप्त हुनेछ! अझ राम्रो बनाउँदा रमाईलो मफिन कप लाइनरहरू ।
PREP: एक कचौरामा झिस्को सुख्खा सामग्री (गहुँ कोकर बाहेक)। भिजेको तत्त्वहरूलाई छुट्टै कचौरामा मिलाउनुहोस्।
मिसि:: भिजेको र सुख्खा सामग्रीहरूमा फोल्ड गर्नुहोस् केवल संयुक्त सम्म। ओभरमिकिक्सिंग कठिन chewy muffins पैदा गर्न सक्छ।
निलो: पीठोको साथ ब्लूबेरी टस गर्नुहोस् र मफिन मिश्रणमा थप्नुहोस्। पिठोले नीलो भाँडालाई मफिनको तलसम्म राख्न मद्दत गर्दछ।
एक पटक ब्याटर तयार भएपछि, प्रत्येक माफिन टिनमा समान रूपमा स्कूप गर्नुहोस् र काठको छनौट सफा नभएसम्म बेक गर्नुहोस्। एक तार र्याकमा चिसो र मजा दिनुहोस्! एक स्वादिष्ट उपचार को लागी, सेवा कोरिएको स्ट्रबेरी बटर !
यी चोकर muffins मा बनाउन सकिन्छ मिनी-मफिन कप मध्यम आकारको कप वा ती विशाल पनि टेक्सास आकारको मफिन कप !
के तपाईं तिनीहरूलाई स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ?
निश्चित, तपाईं सक्नुहुन्छ! यी ब्लूबेरी ब्रान मफिनहरूले राम्रोसँग फ्रिज मात्र गर्दैन तर पग्लन्छ र राम्रोसँग ताजा गर्दछ! निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू पूर्ण रूपमा शीतल छन् उनीहरूलाई यसमा मितिको साथ एउटा zippered झोलामा राख्नु अघि।
पग्लिन, या त काउन्टरमा सेट गर्नुहोस् प्राकृतिक रूपले डिफ्रोस्ट गर्न वा तिनीहरू मध्ये केही माइक्रोवेभ-सुरक्षित कचौरामा राख्नुहोस् र ओसिलो कागज तौलियाले छोप्नुहोस्। केही मिनेट तताउनुहोस्, नम कागज तौलियाबाट बनेको स्टीमले मफिनहरू नरम राख्न मद्दत गर्दछ!
ब्लूबेरी ब्रान मफिनहरू उत्तम स्नैक हुन् वा ब्रेकफास्ट नुस्खा । ब्लूबेरी (ताजा वा फ्रिज गरिएको) को थपको साथ, त्यो केवल मिठो स्वादको लागि, बच्चाहरूले समेत उनीहरू खानेछन्!
थप ब्रेकफास्ट स्नैक्स
केना मफिन्स - min० मिनेट भित्रमा तयार!
सजिलो पम्पकिन मफिनहरू - बिग ब्याच रेसिपी
केरा नट क्रन्च मफिनहरू - एक मिठो, crunchy स्ट्रेसेल को साथ माथि!
रातारात ओट्स - अगाडी बनाउन को लागी महान।
कागती पपीड बीज मफिनहरू - राम्रोसँग मीठो र टार्ट
तयारी समय१० मिनेट कुक समय१ मिनेट कुल समय२ मिनेट सर्भिंगहरू१२ muffins लेखकहोली निल्सन ब्लूबेरी ब्रान मफिनहरू हार्दिक, स्वास्थ्यकर र पोषणले भरिएका हुन्छन्। दुई कप ब्लूबेरी साथ साथै एक कप र गहुँ को चोकरको आधा समावेश! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ ½ चम्मच बेकिंग पाउडर
▢½ चम्मच बेकिंग सोडा
▢¼ कप छोटो पार्दै
▢½ कप ब्राउन सुगर
▢१ ½ कप गहुँको कोकर
▢½ कप दूध
▢½ कप सुन्तलको रस
▢दुई कप ब्लुबेरी ताजा वा स्थिर
▢१ चम्चा पीठो
He०० डिग्री सेल्सियस र तान्न १२ मफिन कप कागजात वा ग्रीस राम्रोसँग।
पीठोमा पिठो, पकाउने पाउडर, बेकिंग सोडा, नुनको मिश्रण गर्नुहोस्, राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र अलग राख्नुहोस्।
फ्ल्फी नभएसम्म मध्यममा एक ह्यान्ड मिक्सरको साथ छोटो पार्नुहोस् र चिनी मिलाउनुहोस्। गुड़, अण्डाहरू र दूध थप्नुहोस्। सम्मिलित नगरे सम्म पिट्नुहोस्।
रस र चोकरमा चलाउनुहोस्। सुख्खा सामग्री थप गर्नुहोस् र नुन नभएसम्म मिश्रण गर्नुहोस्।
बाँकी १ ठूलो चम्मच पीठोको साथ ब्लूबेरी टस गर्नुहोस् र बिस्तारै मिश्रणमा चलाउनुहोस्।
तयार प्यानमा विभाजन गर्नुहोस् र १-20-२० मिनेटमा बेक गर्नुहोस्।
क्यालोरिज:१33,कार्बोहाइड्रेट:। 33g,प्रोटिन:।g,मोटो:6g,पागलिएको बोसो:१g,कोलेस्ट्रॉल:२मिलीग्राम,सोडियम:१44मिलीग्राम,पोटासियम:7२7मिलीग्राम,फाइबर:।g,चिनी:१g,भिटामिन ए:।IU,भिटामिन सी:.6.मिलीग्राम,क्यालसियम:70मिलीग्राम,फलाम:१.9मिलीग्राम
कीवर्डचोकर मफिन्स कोर्समिठाई, खाजा पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
रेसिपीबाट अनुकूलित क्वेकर गहुँको रोटी ।